Nickel amin'ny borosy lamba famaohana an-dakozia toradroa
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucet an-dakozia fisaka Nikela nonoina
Vidio ny kiraro maoderina vita amin'ny zoro eo an-tserasera, 3hree-taona, fandefasana maimaim-poana!
Ny Square Modern Kitchen Faucet 2312301 dia manome fampiononana sy fampisehoana amin'ny fantsonanao amin'ny baorinao na lakozinao.
Ny faucette amin'ny alàlan'ny kianjan'ny ankehitriny dia namboarina avy amin'ny sanda avo 304 izay tsy voatanisa stainless vy namboarina tamin'ny vy azo tamin'ny 3 taonany.
Fitaovana an-tsokosoko an-dakozia tokana fotsiny ho an'ny fampitomboana lehibe kokoa.
NickelConstruction voatoraka izay miantoka maharitra sy maharitra kokoa.
Anisan'izany ny fitaovana fitifirana, ny rano mafana sy ny rano mangatsiaka, ny haben'ny USStandard.
FIVORIANA avo lenta: gripo misy spout fanampiny avo lenta dia manome rano mikoriana tsara tarehy, tsy milamina intsony, mahatonga ny fanasana ho mahomby kokoa amin'ny haavony ampy, manahaka ny fihetsiky ny rano voajanahary.
MAFANA DUAL MAFANA & MASINA: tsipika famatsiana fauxet mafana sy mangatsiaka omena, ny lever tokana dia afaka mifehy mora foana ny mari-pana sy ny habetsany, mahatonga ny fandidiana haingana sy mahomby kokoa
MULTI-LAYER NICKEL SURFACE: ny takelaka tsirairay misy tombo-kase dia nasiana tombo-kase, velaran-tsoloka mahafinaritra dia afaka misoroka ny loto, ny loto, ny manohitra ny tanany isan'andro, mihazona tsara tarehy
Zava-mahadomelina FAMPISEHOANA: akora vy matevina izay miantoka ny fanabeazana ny fiainana sy ny kalitao tsy fahita, tsy misy loto
Ady 3 taona, Fanohanana ny mpanjifa 24/7: garantiana voafetra hitranga amin'ireo leaks, drip, break, ary mamarana ny lesoka, rakotry ny fiverenana maimaim-poana 90 andro izy, FISEHOAN-KONDRANA EMAIL_service@wowowfaucet.com
SKU: 2312301 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: Nickel nopotehina, Flat, Fandraisana anjara tokana
12 X 8.6 X 2.9 santimetatra
Waterfall Modern Design